थाहा खबर: प्रिमियर लिगमा सात खेल, को–को भए विजयी ?
प्रिमियर लिगमा सात खेल, को–को भए विजयी ?
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबार राति सात खेल भएका छन्।
शनिबार भएको पहिलो खेलमा चेल्सीले साउथ ह्याम्टनलाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । अर्को खेलमा लिभरपुलले बर्ममाउथलाई ३–२ गोल अन्तरले पाखा लागायो। जितसंगै उसले म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँगको अंक दुरी घटाएको छ। पहिलो हाफको सातौ मिनेटमा मनेको गोल मार्फत अग्रता लिएको लिभरपुलले दोस्रो हाफमा दुईगोल गर्यो। उसकालागि खेलको ६९ औं मिनेटमा सलाह र ९० औं मिनेटमा फिरमिनोल गोल गरे।
शनिबार नै भएको अर्को खेलमा म्यानचेस्टर सिटिले टोटनह्यामलाई ३–१ गोल अन्तरले हरायो। पहिलो हाफमा २–१ गोलले सकिएको खेलको दोस्रो हाफको ७२ औं मिनेटमा थप एक गोल गर्दै म्यानचेस्टर सिटी अंक तालिकाको शीर्षको अंक दुरीअझै बढाएको छ।
शनिबार नै भएका अन्य खेलमा बर्नलीले लेस्टर सिटिलाई २–१ ले पाखा लगाउँदा क्रिस्टल प्यालेसले ब्रिस्टनलाई ३–२ गोल अन्तरले हरायो। त्यस्तै हट्सफिडले वार्टफोर्डलाई १–० ले पराजित गर्दा स्वेन्सा र इर्भटनले एक एकको बराबरी खेले।
लिग तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीको ३३ खेलबाट ८७ अंक भएको छ भने म्यानचेस्टर युनाइटेड दोस्रो स्थानमा रहँदा एक खेल कम खेलेको उसको ७१ अंक छ। त्यस्तै लिभरपुलको ३४ औं खेलबाट ७० अंक हुँदा चौथो स्थानमा रहेको टोटनह्यामको ३३ खेलबाट ६७ अंक भएको छ।